ဖက်ရှင်ရိုးရိုးလေးနဲပ အပြတ်အသတ်ဂေါ်လွန်းနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ပုံရိပ်များ – Shwe Sar
မြင်သူတိုင်းငေးလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးတွေတိုင်းမှာ ရှင်ယွန်းတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များလာတဲ့မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်…..မေမေ လာရင် နိုစို့မယ်….ဖေဖေ လာရင် အုန်းသီး ခွဲစားမယ်…. မိုးရေထဲမှာ ထွက်ဆော့ ရတာကို ကြိုက်တယ်..ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေတွက် ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ အ လန်းစားက ပုံလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မွငျသူတိုငျးငေးလောကျတဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျး အလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျောဒယျလျရှငျယှနျးမွတျကို သိကွမယျထငျပါတယျနျော။မျောဒယျလျလောကကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမဲ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့တဈခဲနကျအားပေးမှုကို ရယူပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံ အားပေးမှုအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့ ဆိုရှယျမီဒီယာ လောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျနသေူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပုံလေးတှတေိုငျးမှာ ရှငျယှနျးတဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိ နဲ့ လနျးလှနျးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။သူမကတော့ လတျတလော လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ အမြိုးသားတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးကိုခံနရေတာဖွဈပွီး လူကွိုကျမြားလာတဲ့မိုးရှာရငျ မိုးရခြေိုးမယျ…..မမေေ လာရငျ နိုစို့မယျ….ဖဖေေ လာရငျ အုနျးသီး ခှဲစားမယျ…. မိုးရထေဲမှာ ထှကျဆော့ ရတာကို ကွိုကျတယျ..ကဲ…ခဈြပရိသတျတှတှေကျ ရှငျယှနျးမွတျရဲ့ အ လနျးစားက ပုံလေးကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
Previous post မြန်မာ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ကောက်ကြောင်းလှ ကို ပေါ်လွင်အောင် လှလွန်းနေတဲ့ မေပန်းချီ
Next post ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကြောင့် အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်လောက်တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်